Mpanafika cash point Lavon’ny polisy teny Namontana ny iray
Tena faritra mena ny etsy Namontana. Jiolahy iray nikasa hanao fanafihana mitam-piadiana teny an-toerana indray no maty voatifitry ny polisy afak’omaly alina teny an-toerana tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany.
Lavo teo noho eo ity jiolahy ity izay marihina fa nahitana basy vita gasy niaraka amin'ny bala tany aminy raha tafatsoaka kosa ny namany . Efa tsy zoviana amin'ireo olona mipetraka eny an-toerana intsony moa ity Jiolahy ity ary malaza amin'ny fanafihana cash-point. Voatonona ho isan'ireo nanao fanafihana tetsy Ambodifilao ihany koa ny tenany.
Legende : Ity ilay jiolahy lavo !